Klopp oo Liverpool ugu baaqay Soo qaadashada Rodrygo.
Home Horyaalka Ingiriiska Klopp oo Liverpool ugu baaqay Soo qaadashada Rodrygo.
Macalinka kooxda liverpool Jurgen Klopp wuxuu doonayaa Liverpool inay u dhaqaaqdo da’yarka reer brazil ee Rodrygo sida ay baahisay Diario Gol Xiddiga Real Madrid ayaa bedeli kara mid ka mid ah seddexda xidig kooxda afka hore uga ciyaarta.
Warbixinta ayaa sheegeysa in mid ka mid ah seddexda xidig ee kooxda Liverpool Mohamed Salah, Sadio Mane ama Roberto Firmino – ay u badan tahay in mid kamid ah uu ka baxo Anfield xagaaga.
Liverpool ayaa Diogo Jota u heysta weeraryahan halis badan marka laga soo tago sedaxda ugu halista badan kooxda liverpool waxay xoojinaysaa Safkeeda ka dib xilli ciyaareed ciqaab ah oo ay dhexda ka galeen.
Previous articleLiverpool “aad ayey uga murugootay” geerida aabihiis Alisson Becker
Next articleXidiga Real Madrid Borja Mayoral oo damacsan inuu si Rasmi ah uga mid noqdo Roma.